Arahabao Ny Lalàmpanorenana Vaovaon’i Thailandy. Ary Arahabao Indray Ny Didy Miaramila Ao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Arahabao Ny Lalàmpanorenana Vaovaon'i Thailandy. Ary Arahabao Indray Ny Didy Miaramila Ao Thailandy
Voadika ny 25 Aogositra 2016 5:48 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, Español, English
Thailandy, Bangkok. 24 Septambra 2006. M41 Walker Bulldogs nijanona tao amin'ny tokontanin'ny Minisiteran'ny Fiarovana. Sary avy amin'i Roger JG. CC 2.5.
Tany am-piandohan'ity volana ity, nandany ny lalàmpanorenana vaovao tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka manerana ny firenena ireo mpifidy ao Thailandy. Nilaza ireo mpanohana ny lalàmpanorenana vaovao, izay novolavolain'ny governemanta tohanan'ny miaramila eo ambanin'ny Filankevi-pirenena ho an'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana (NCPO) fa mitondra mankany amin'ny famerenana indray ny fitondrana sivily izany. Na izany aza, miahiahy ireo mpitsikera fa hampijoro ho ara-dalàna ny fitondrana jadona miaramila ao Thailandy sy ny famoretany ny haino aman-jery fotsiny ny lalàmpanorenana vaovao.
Raha naka an-keriny ny fahefana ny miaramila tamin'ny 2014, nanome toky ny vahoaka izy fa hotontosaina ny fifidianana raha vao tafajoro ny fanavaozana ara-politika sy ara-pifidianana. Roa taona tatỳ aoriana, mbola eo amin'ny fahefana ny fitondrana miaramila. Voaràra ny fihetsiketsehana ara-politika, voafehy mafy ny haino aman-jery ary matetika iharan'ny fandaharana “fanitsiana toe-tsaina” ireo mpikatroka notazonin'ny polisy.
Nandrisika ny vahoaka ny NCPO mba hankatoa ny volavolan-dalàm-panorenana, nolazainy fa hanafaingana ny “maha ara-dalàna” ny politika ao Thailandy izany, ary ahafahana manao fifidianana amin'ny 2017 na 2018. Voaràra ny fampielezan-kevitra ho an'ny manaiky na manohitra ny lalàmpanorenana, na izany aza, milaza ireo mpitsikera fa tsy nahazo vaovao sahaza momba ny votoatin'ny lalàmpanorenana ny mpifidy. Matahotra ny fanasaziana noho ny fikasana tsy ara-dalàna “handresy lahatra” olona, tsy niresaka momba ny volavolan-dalàmpanorenana ampahibemaso amin'ny antsipirihany betsaka na ny mpanao gazety na ny manam-pahaizana.
Ho diso fanantenana ireo izay manantena ny miaramila hametra-pialàna sy hankatoa ny fahambonian'ny fitondrana sivily raha hahafantatra fa ahafahan'ny miaramila hitondra ny firenena amin'ny alalan'ny fomba isan-karazany ny lalàmpanorenana. Ohatra, hofantenin'ny NCPO ny loholona 194.
Ny sary torohay eto ambany, izay navoakan'ny vohikalam-baovao tsy miankina sy ny mpiara miasa amin'ny Global Voices, Prachatai dia manazava ny rafitra isan-karazany amin'ny lalàmpanorenana izay hahafahan'ny miaramila hamehy ny governemanta:
Sary torohay avy amin'ny Prachatai
Toa tsy hita lasa lavitra ny fifehezan'ny miaramila ny fampahalalam-baovao. Nampitandrina ny Firaisan'ny Gazety Aziatiaka Atsimo Atsinanana (SEAPA) fa “mety afaka manome fahefana bebe kokoa ho an'ny fanjakana hitsabahana eo amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra” ny lalàmpanorenana. Nilaza koa izy fa “fihemorana” ny lalàmpanorenana raha oharina amin'ny lalàmpanorenana 2007, raha resaka fanohanana ny fahalalahan'ny haino aman-jery no resahana.
Nilaza ny SEAPA fa hanohintohina ny fahalalahana miteny ny fizarana 34, 35, 36, 41, sy ny 60 ao amin'ny lalàm-panorenana vaovao.
Ny fizarana faha-34 ohatra dia miantoka ny fahalalahana akademika saingy milaza ihany koa fa ity zo ity dia “tsy tokony mifanohitra amin'ny andraikitry ny vahoaka Thailandey na ny fitondran-tena tsaran'ny olona ary tokony hanaja fa tsy manakantsakana ny tsy fitovian-kevitry ny hafa.” Araka ny filazan'ny mpandalina ao amin'ny SEAPA, ny andian-teny “tsy tokony manakantsakana ny hevitra tsy mitovy amin'ny olon-kafa” dia mifanohitra amin'ny fototry ny fikarohana akademika.
Ny fizarana faha-35 kosa mandritra izany, dia tsy ahitana fiarovana ny haino aman-jery izay hita tamin'ny lalàmpanorenana Thailandey 2007, fa manaisotra ny zon'ny fampahalalam-baovao handamina ny ambaratongan'ny mpiasan'izy ireo manokana, ny fifehezan-tena, sy ny fampiroboroboana ny etika matihanina. Araka ny lalàmpanorenana vao nolaniana, dia tsy voaantoka intsony ny fahaleovantena ara-panoratan'ny mpanao gazety amin'ny haino aman-jerim-panjakana. Ny lalàmpanorenana 2007 dia nanasokajy ny fitsabahan'ny fanjakana an-tsehatra amin'ny haino aman-jery ho toy ny “fihoaram-pahefana”. Tsy ahitana izany teny izany anefa ny lalàmpanorenana vaovao.
Sary torohay avy amin'ny Firaisan'ny Gazety Aziatika Atsimo Atsinanana
Miharihary fa ny lalàmpanorenana vaovao dia mampiroborobo ny fanjakazakan'ny miaramila, mandrahona hampijoro ara-dalàna kokoa ny kolontsain'ny sivana sy ny fanarahamaso ataon'ny fanjakana amin'ny haino aman-jery.